Izifo kanye namafutha omzimba
Umzimba womuntu ungumphumela omangalisayo wokuziphendukela kwemvelo. Kungenza okuningi futhi kusinikeza izinzwa eziningi ezimnandi, kodwa, ngaphandle kwalokhu, azikho izinkinga ezimbalwa. Ukuze umzimba, njenganoma iyiphi enye indlela eyinkimbinkimbi, ukuba usebenze isikhathi eside ngangokunokwenzeka, kuyadingeka ukuba ulandele futhi ulunake ngokucophelela. Kodwa ngezinye izikhathi, noma iyiphi indlela ihluleka. Kungabonisa ngokuhluke ngokuphelele, ngezinye izikhathi sizizwa ubuhlungu noma ukukhathala, futhi ngezinye izikhathi iphunga elimnandi. Uma sazi ukuthi kungani siphunga ngandlela-thile, singakwazi ukuthi iyiphi ingxenye yesistimu ehlulekile futhi sithathe isinyathelo ngokushesha.
Abantu bavame ukukhononda ngokuphefumula okubi. Bazama ukukufihla ngokuhlafuna i-gum noma i-flavouring, ukuhlanza amanzi, i-toothpaste noma ukudla, kodwa ukufihla okunjalo akuxazululisi inkinga.
Cishe isigamu sabo bonke abantu emhlabeni siphunga iphunga elimnandi emlonyeni, elibonakala njalo noma ngezikhathi ezithile. Kukhona igama laleli phutha - halitosis. Kodwa abantu abaningi abazi ukuthi kukhona okungahambi kahle ngokuphefumula kwabo, baze bezwe ukuphawula kwabanye futhi kuhle uma kwenziwa ngendlela efanele. Uma ufuna ukwazi ukuthi umoya wakho uphunga kanjani - swayipha nje nge-swab yekotini noma hhayi ucezu olubukhali lwephepha ngolimi olubhekene nezindebe. Uzobona i-plaque emhlophe noma ephuzi. Iphunga layo lihambisana nephunga lokuphefumula kwakho. Awuthandi? Kungase kube nezizathu eziningana zalokhu.
Isizathu sokuqala ukudla. Uma udle okuthile futhi "okumnandi", isibonelo, i-garlic, anyanisi, inhlanzi, akumangazi ukuthi kukhona okungahambi kahle ngokuphefumula kwakho.
Isizathu sesibili ama-bacterium, amakhulu emlonyeni, kakhulu kunanoma ikuphi emzimbeni wethu. Uma inkinga ikhona kulokhu, ungayilahla ngokuhlanza ngokucophelela amazinyo, izinsini kanye nolimi lwakho. Izinqubo ezilula zansuku zonke ezihlanzekile zingagcina izikhundla.
Isizathu sesithathu yizinkinga zokubola izinyo kanye nezinkinga. Kulokhu, ukuvakashela udokotela wamazinyo kuyadingeka.
Esinye isizathu kuyinkinga nge-tract emathunjini noma isibindi. Ukuthola ukwephulwa komsebenzi wale mizimba kuzosiza ukuhlolwa kwezokwelapha, futhi kuqede imiphumela - ukwelashwa okunemfanelo.
Futhi, ekugcineni, enye imbangela evamile yokumunuka okubi emlonyeni ukubhema. Ungakwazi ukuxazulula le nkinga ngezindlela ezimbili - ngokungafuni ukubhema noma ukuguqulwa okuqhubekayo, okuyinto wonke umuntu owaziyo ngempumelelo.
Umzimba wethu uhlelwe ukuze ngosizo lwezikhumba ze-sweat, i-toxins, umswakama kanye nezinye izinto zisuke zisuka emzimbeni. Ngokwalo, ukuthuthumela akukuzwisi. Iphunga elingathandeki livela ngenxa yokudilizwa kwezinto futhi ngenxa yebhaktheriya ehlala emzimbeni wethu. Ngokujwayelekile, ukuze ususe iphunga elimnandi lokuthuthumela, nje ugeza futhi ushintshe izingubo. Kodwa ezinye zalezi zinqubo ezilula azisizi, izigulane zazo zithuthuka zisebenza kakhulu kangangokuba iphunga lokuthuthumela liyabashushisa ngisho noma kungekho sizathu sokwenza kanjalo.
Kulesi simo, udinga ukubona udokotela ozokweluleka ukwelashwa. Kubalulekile ukuyeka izinongo eziningi, ukuqapha ukudla kwakho, ukuphuza uketshezi oluthe xaxa nokugcina yonke imithetho yokuhlanzeka.
I-urine inephunga elithile elimnandi kakhulu, kodwa ngezinye izikhathi lingase iphunga kakhulu. Lokhu kubonisa ukuthi kukhona izinkinga. A iphunga ammonia iphunga ukhuluma izifo umchamo - uhlelo lokuzala. Lesi isignali ukuthi udinga ukubona udokotela ngokuphuthumayo.
Ngokuhlanzeka okufanele, izitho zocansi azikho iziphuzo ezimbi ezimbi. Iphunga elimnandi, elifana nephunga lezinhlanzi ezivela ekukhuculeni kwesisu, kubonisa ukuphazamiseka okukhulu ohlelweni lwezocansi kanye nokuba khona kwezifo. Kungaba yi-vaginosis, i-chlamydia, njll. Lezi zinkinga zibalulekile ukuxazulula ngokuhamba kwesikhathi ngosizo lodokotela.
Abantu abaningi bacabanga ukuthi izipikili azizwakali. Yiqiniso, izipikili azizwakali nhlobo uma izandla zihlanzekile. Kodwa ngezinye izikhathi awukwazi ukubona iphunga elimnandi kakhulu, elivela ngaphansi kwepikili. Lokhu kubonisa ukutheleleka kwefungal. Kubalulekile ukuphatha ukwelashwa, ukucabangela ukuhlanzeka komuntu, khona-ke uphawu olunjalo luyoshabalalisa ngokushesha ngaphandle kwemiphumela nemiphumela.
Ngamunye wethu unephunga lakhe elikhethekile, esingazizwa, ngoba sijwayele kulo. Ngakho ungaliphunga iphunga labesifazane abasebenzisa umkhiqizo ofanayo isikhathi eside kakhulu. Le iphunga iba into ebonakalayo ize iqala ukusikhathaza. Umzimba usitshela ukuthi kudingeka uhlolwe futhi uphathwe, uma uphendula ngezikhathi ezinjalo, ngeke kube nemiphumela.
Kulimaza futhi kuzuze ikhofi
Ungayilungisa kanjani ukuhleleka futhi wenze emuva ngisho?
Izakhiwo zokwelapha nezomlingo we-kyanite
Ukulahlekelwa izinwele ngemuva kokulethwa nokulahlwa
Izindlela zokususa ama-moles
Ukwelashwa kwesifo somfutho wegazi ophezulu
Amafutha avela amamaki abesifazane abakhulelwe
Ushizi Usobho eM Multivariate
UVictoria Bonu uboshwe esikhumulweni sezindiza e-Nice
Izinhlobo ezingu-6 zamadoda abo ubuhlobo babo bungcono ukugwema
Ukuhlukaniswa yingane ngesikhathi sikaKhisimusi nesikhathi sikaKhisimusi
Indlela yokuthola umyeni ocebile nokuphanayo
Anatoly Papanov, biography neminyaka yokuphila
Indlela yokuhlanza isisu emva kokubeletha
Ukwelashwa komculo njengendlela yokwelapha ubuciko
Ingaphakathi nokwakhiwa kwefulethini lanamuhla
Amaphayi aphekwe ngamakhowe kanye nenkukhu
Ngingalala kanjani ngesikhathi sokukhulelwa?